Ra’iisul Wasaare Khayre: ”Sida Dunidu Noola Dhaqanto Iyo qanaacada Dadka Soomaaliyeed, Waxaa lafdhabar u Ah Garsoorka Dalka – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Khayre: ”Sida Dunidu Noola Dhaqanto Iyo qanaacada Dadka Soomaaliyeed, Waxaa lafdhabar u Ah Garsoorka Dalka
Febraayo 8, 2019 11:12 b 0
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Mudane Xasan Cali Khayre oo casho sharaf Muqdisho ugu sameeyay madaxda garsoorka dalka, ayaa sheegay in hagaajinta dhaqaalaha dalka, yaraynta musuq-maasuqa, horumarinta dawlad wanaagga, hir-gelinta siyaasad lagu wada qanacsanyahay iyo aaminaadda dunida ay ku xiranyihiin hir-gelinta Garsoor iyo cadaalad loo simanyahay oo dadka Soomaaliyeed ay iimaanka ku qabaan.
Casho Sharafta oo ay kasoo qayb galeen guddoomiyaha maxkamadda sare, xeer ilaaliyaha qaranka, garsoorka gobalka Banaadir iyo dawlad gobaleedyada ayaa muhiimaddiisu ahayd dhiirri gelinta dardar-gelinta qorshaha hagaajinta garsoorka dalka.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa madaxda garsoorka dalka ku ammaanay shir sannadeedka ay qabteen, waxa uuna ku dhiirri geliyay in ay joogteeyaan kulamada ay uga tashanayaan horumainta iyo hagaajinta hannaanka gasoorka dalka.
Himilooyinka tubta cadaaladda iyo amniga ayaa waxaa ku jira halbeegyo muhiim u ah horumarinta cadaaladda iyo garsoorka dalka si loo helo caddaalad loo simanyahay.
Madaxwaynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay soo xiray shir sannadeedkii ugu horreeyay ee burbrkii dalka kadib looga arrinsado garsoorka Soomaaliya.
MAANHADAL: Dilalka Bossaso iyo mustaqbalka maamulka Dekedda Bosaaso (dhegayso | daawo)
Qoyska dhalay wiil miino la qaraxday oo DFS fariin u diray (dhegayso)